Wezifo ezithelelanayo Yokucwaninga Kit
Digstive Tract Yokucwaninga Kit
Pediatric Kit Yokucwaninga
Zokuphefumula System Yokucwaninga Kit
Umsebenzi kwezinso Kit Yokucwaninga
Senhliziyo Kit Yokucwaninga
I-hormone Yokucwaninga Kit
Ukuvuvukala Yokucwaninga Kit
Tumorigenesis Yokucwaninga Kit
Ephathekayo Analyser mzimba
imikhiqizo ethengwa kakhulu
Kit sokuxilonga ukuze 25-hydroxy Vitamin D (fluorescen ...
Kit sokuxilonga ukuze antigen ukuba Helicobacter Pylori (...
Kit sokuxilonga ukuze omzimba ukuba Helicobacter Pylori (F ...
Kit sokuxilonga ukuze human chorionic gonadotropin (fluo ...
Kit sokuxilonga ukuze D-Dimer (fluorescence immunochromatographic Assay)
Kit sokuxilonga ukuze D-Dimer (fluorescence immunochromatographic Assay) Ukuze ngaphandle kwesibeletho ukusetshenziswa zokuxilonga kuphela Sicela ufunde lokhu iphakethe ufaka ngokucophelela ngaphambi ukusebenzisa futhi ngokuqinile landela imiyalelo. Ukuthembeka Assay Imiphumela akukwazi ukuqinisekiswa uma kukhona ngeziphambeko kusukela imiyalelo kule Faka iphakethe. Okuhloswe UKUSETSHENZISWA Yokucwaninga Kit for D-Dimer (fluorescence Assay immunochromatographic) kuyinto fluorescence Assay immunochromatographic ngenxa ukuthola ambalwa of D-Dimer (DD) i ...
Ukuze ngaphandle kwesibeletho ukusetshenziswa zokuxilonga kuphela
Sicela ufunde lokhu iphakethe ufaka ngokucophelela ngaphambi ukusebenzisa futhi ngokuqinile landela imiyalelo. Ukuthembeka Assay Imiphumela akukwazi ukuqinisekiswa uma kukhona ngeziphambeko kusukela imiyalelo kule Faka iphakethe.
Yokucwaninga Kit for D-Dimer (fluorescence Assay immunochromatographic) kuyinto fluorescence Assay immunochromatographic ngenxa ukuthola ambalwa of D-Dimer (DD) e-plasma womuntu, isetshenziselwa sitholakele thrombosis emithambo yegazi, eqonda coagulation intravascular, kanye nokuqapha yokwelapha thrombolytic .Konke isampula omuhle kumele kuqinisekiswa nezinye izindlela. Lokhu kuhlola senzelwe kwezempilo ukusetshenziswa professional kuphela.
DD ibonisa fibrinolytic function.The izizathu nesanda DD: hyperfibrinolysis 1.Secondary, ezifana hypercoagulation, eqonda coagulation intravascular, isifo so-renal, isitho ukufakelwa kwenqatshwa, ukwelashwa thrombolytic, njll 2.There ocushiwe thrombus kwetinhlavu kanye nemisebenzi fibrinolysis e izitsha; Infarction 3.Myocardial, infarction palsy, embolism yamaphaphu, thrombosis emithambo yegazi, ukuhlinzwa, isimila, ehlasela umzimba coagulation intravascular, ukutheleleka nezicubu necrosis, njll
ISIMISO SOMTHETHO INQUBO
I ulwelwesi zedivayisi ekuhlolweni camera nge anti DD omzimba ku esifundeni test nembuzi unogwaja anti IgG omzimba ku esifundeni control. Pad Lable kuthiwa camera nge fluorescence esinelebuli anti DD omzimba kanye unogwaja IgG kusengaphambili. Lapho ukuhlola isampula HIV, antigen DD kwisempula okuhlangana ngayo fluorescence esinelebuli anti DD omzimba, futhi yakha ingxube mzimba. Ngaphansi isenzo immunochromatography, ukugeleza eziyinkimbinkimbi bebheke iphepha umswakama, lapho eziyinkimbinkimbi lidlule esifundeni test, kuhlangene anti DD enamathela omzimba, yakha isakhiwo esisha. DD Ileveli kahle kuhlobene nezinga isignali fluorescence, futhi lokuhlushwa DD kwisempula kungatholakala by fluorescence immunoassay Assay.
Reagents nangezinto zokwakha
Izingxenye 25T iphakethe :
ikhadi Test ngamunye ucwecwe pouched nge desiccant 25T
Sample diluents 25T
faka Iphakheji 1
TINTFO ADINGEKAYO KEPHA INIKEZELWA
Sample iqoqo esitsheni, timer
ISAMPULA IQOQO KANYE UKUGCINWA
amasampula .I ihlolwe kungaba heparin anticoagulant oketshezini olungenambala olusegazini noma EDTA anticoagulant plasma.
.Ngokusho amasu ejwayelekile ukuqoqa isampula. Serum noma uketshezi olungenambala olusegazini isampula ingagcinwa esiqandisini ezingeni 2-8 ℃ ngoba 7days futhi cryopreservation ngezansi -15 ° C izinyanga ezingu-6.
.Konke isampula Gwema nqabela-ncibilika imijikelezo.
Sicela ufunde ibhukwana ukusebenza insimbi kanye iphakheji Faka ngaphambi kokuhlolwa.
1.Lay eceleni zonke reagents futhi amasampuli ekamelweni lokushisa.
2.Open Ephathekayo Immune Analyser (Wiz-A101), faka ngemvume iphasiwedi ye-akhawunti ngokwendlela indlela ukusebenza kwe-ithuluzi, bese ufaka i-interface ukuthola.
3.Scan ikhodi dentification ukuqinisekisa into yokuhlola.
4.Take out ikhadi test kusukela isikhwama ucwecwe.
5.Insert ikhadi yokuhlola ku embobeni yekhadi, ihlole ikhodi QR, futhi ukucacisa nto test.
6.Add 40μL serum noma uketshezi olungenambala olusegazini isampula lokuphuza diluent, uhlanganise kahle ..
isixazululo 7.Add 80μL isampula lokuphuza kahle ekhadini.
8.Click "standard test" inkinobho, ngemva kwemizuzu engu-15, lo mshini izothola ngokuzenzakalela ikhadi test, kungaba ukufunda Imiphumela iboniswe isihenqo insimbi, futhi urekhode / ukuphrinta imiphumela yokuhlolwa.
9.Refer imfundo enikezwa ephathekayo Immune Analyser (Wiz-A101).
Kunconywa ukuthi laboratory ngamunye ukumisa okwabo siqu uhla yayo evamile emelela bakhona nesineke.
IMIPHUMELA YOKUHLOLWA KANYE UKUHUNYUSHWA
.I ngenhla idatha kuwumphumela DD reagent ukuhlolwa, futhi wasikisela ukuthi laboratory ngamunye kumele ajube ithimba uhla DD ukuthola amanani ofanele labantu kule ndawo. Imiphumela kokungaphezulu ukuze uthole inkomba kuphela.
.I imiphumela le ndlela ziyasetshenziswa amabanga inkomba elisungulwe le ndlela kuphela, futhi akukho comparability ngqo ezinye izindlela.
.Abanye izici ingabagulisa amaphutha ukuthola imiphumela, kuhlanganise Ngezizathu zezobuchwepheshe, amaphutha tekusebenta nezinye izinto isampula.
UKUGCINWA KANYE ESIZINZILE
1.The kwekhithi izinyanga ezingu-18 eshalofini-ukuphila kusukela usuku ukwakhiwa. Gcina kits ubuningi at 2-30 ° C. Hhayi kwi freezer. Ungayisebenzisi ngale okungapheli.
2.Do ukuvula sikhwama uphawu kuze kube yilapho usukulungele ukwenza isivivinyo esithile, bese isivivinyo esisodwa-ukusebenzisa kusikiselwa ukuba kusetshenziswe ngaphansi imvelo edingekayo (lokushisa 2-35 ℃, umswakama 40-90%) ngaphakathi amaminithi 60 ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Diluent 3.Sample isetshenziswa ngokushesha ngemva kokuba kuvulwe.
IZIXWAYISO kanye Okumele kuqashelwe
1.The ikhithi kufanele uphawu futhi uvikelekile umswakama.
2.All zezinhlobo omuhle liyakushunyayelwa sigunyazwe nezinye izindlela.
3.All zezinhlobo ngeke ziphathwe njengemfucuza ukungcola ezingaba khona.
4.DO usebenzise reagent yisikhathi.
5.DO HHAYI Yokunikezelana reagents phakathi kits nge eziningi ezahlukene Cha ..
6.DO HHAYI usebenzise amakhadi test futhi iyiphi izesekeli zalutho.
7.Misoperation, ngokweqile noma isampula elincane kungaholela umphumela ngeziphambeko.
.Njengoba nanoma yimuphi Assay kuqashwa igundane amasosha omzimba, kungenzeka ekhona ithonya lomuntu anti-igundane amasosha omzimba (Hama) e isifanekiso. Zezinhlobo ezigulini abamukele amalungiselelo omzimba monoclonal ngoba uphethwe noma ukwelashwa ingaqukatha Hama. Zezinhlobo ezinjalo zingakwenza Imiphumela okungamanga noma amanga ezimbi.
.Le yi ekuhlolweni kuphela inkomba yomtholampilo, akufanele laba yisisekelo kuphela uphethwe emitholampilo kanye nokwelashwa, iziguli ukuphathwa emitholampilo kufanele kube ukucabangela esibanzi kuhlangene izimpawu zayo, umlando wezempilo, nezinye luhlolo laboratory, impendulo ukwelashwa, lwezifo kanye neminye imininingwane .
.Le reagent isetshenziselwa kuphela ukuhlolwa serum ne-plasma. Kungase bathole yi olunembile uma isetshenziselwa ezinye amasampula ezifana ngamathe futhi umchamo futhi njll
Linearity 0.2mg / L to10mg / L ukuphambuka isihlobo: -15% kuya ku- + 15%.
Ukuthuthukiswa ukuhlanganisa Coefficient: (r) ≥0.9900
Ukunemba Izinga yokutakula uzakwenziwa phakathi 85% - 115%.
Ngokucacile (Akekho izinto ngesikhathi interferent wavivinya liphazamisa ku Assay)
100mg / L
1.Hansen JH, et al.HAMA Impambaniso nge Immunoassays Murine Monoclonal omzimba-Isekelwe [J] .B ka Clin Immunoassay, 1993,16: 294-299.
2.Levinson SS.The Umhlobo Heterophilic Amasosha Omzimba kanye Indima e Immunoassay Impambaniso [J] .B ka Clin Immunoassay, 1992,15: 108-114.
Isihluthulelo izimpawu ezisetshenziswa:
Ngaphandle kwesibeletho Yokucwaninga Kudivayisi Medical
Isitolo at 2-30 ℃
Bheka Imiyalelo Ukuze Sebenzisa
Ikheli: 3-4 Floor, NO.16 Isakhiwo, Workshop Bio-ezokwelapha, wezi-2030 Wengjiao West Road, Haicang District, 361026, Xiamen, China
Ucingo: + 86-592-6808278
Ifeksi: + 86- 592-6808279
Previous: Kit sokuxilonga ukuze Ubude thyroxine (fluorescence immunochromatographic Assay)
Olandelayo: Kit sokuxilonga ukuze 25-hydroxy Vitamin D (fluorescence immunochromatographic Assay)
Senhliziyo Test Kit
Kit sokuxilonga ukuze senhliziyo Troponin mina (fluoresc ...
Kit sokuxilonga ukuze Isoenzyme MB Creatine Kin ...
Kit sokuxilonga ukuze 25-hydroxy Vitamin D (Fluor ...
Senhliziyo Yokucwaninga Kit-NT-proBNP